Nooca Flange Warshada wax-soo-saarka wax-soo-saarka - Nooca Flange-ga Shiinaha Soo-saareyaasha wax-soo-saarka wax-soo-saarka, alaab-qeybiyeyaasha
6.Flange nooca wax ku dhufashada nooca ilkaha
-dharka wax ku dhufashada qalabka dibadda
-dharka wax lagu dilo ee gudaha
-Qalabka aan gear-gaab ahayn
Waxa Lagu Sameeyey Dalka Shiinaha
1. Waxaanu nahay soo-saare wax-soo-saar leh in ka badan toban sano.
2. Waxaan leenahay qalab farsamo oo horumarsan iyo kooxda ilaalinta tayada adag.
3. Xawaaraha wax-soo-saarka oo hufan iyo adeeg gaarsiinta wakhtiga.
4. Aqbal wax soo saarka caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn.
XZWD|Xidhadaha wax lagu dhufto ee fudud ee mashiinka wax lagu duubo
Gawaarida qallafsan ee khafiifka ahloo isticmaalo kaas oo leh waajibaad fudud, laakiin u baahan rotary.Sida mashiinka baakadaha dhalada.Xirmada wax lagu gowraco waxay ka dhigi kartaa mashiinka baakadku inuu si habsami leh u wareego oo uu buuxiyo cabitaannada.